Abavelisi kunye nabathengisi baseTshayina China Itekhnoloji yeShouzheng
Igama lemveliso: Mask wezonyango
Ububanzi: iilelitha ezi-3
Izinto zokucoca: ezingezoluki + ezinyibilikisiweyo + ezingalukwanga
Umlinganiso weFiltha: ≥95%
Ubungakanani: 17.5 x 9.5cm (okanye njengoko kuceliwe)
Chwetheza: Ukuxhonywa kwendlebe
Izinto eziluncedo: iileyitha ezi-3 zokucocwa, akukhovumba, izinto ezinxamnye nezifo, ukufakelwa kococeko, ukuphefumla okuhle. Ngokuphumelelayo thintela inhalation yothuli, umungu, inwele, umkhuhlane, intsholongwane, njl.
Ikliphu efihliweyo yempumlo: inokulandela uhlengahlengiso lobuso ebusweni, ifanele ubuso Bephezulu, bungqingqe okanye iindlebe ezivulekileyo zeendlebe, iindlebe zikhululekile.
Ukusetyenziswa: Isibhedlele, Ikliniki, iLab, ugqirha wamazinyo, ukusebenzisa imihla ngemihla, ukugaya, ukucheba, ukutshisa, ukosula, ukubheja, okanye ezinye izinto ezinothuli.
Ukupakisha: I-10pc / ibhegi, 50pcs / ibhokisi, 2000pcs / ibhokisi eyibhokisi okanye ngokwendlela ehleliweyo
Imigangatho: Ukusebenza kokulungiswa kweentsholongwane kwimaski akufuneki kube ngaphantsi kwe-95%. (Kuyafana nokusebenza kokufakelwa kwebacteria kwi "YY 0469-2011 Mask Medical upasuaji")
Qaphela: Sikwanazo iimaski ezi-4 kunye neemaski ezi-5.
Iimaski zonyango sisixhobo esinokusetyenziswa ukunqanda ukusasazeka kwesifo sokuphefumla.
Imigangatho yethu yemaski: YY / T0969-2013
I-BFE: ≥95%, umlinganiso we-Filter: ≥95%
Izinto zokucoca: ezingalukwanga + ziyanyibilika blown≥95% + ezingalukwanga.
-FFP1 imaski yokucoca ≥80% yeeerosols (ukuvuza okungaphakathi okuphakathi <22%);
- I-FFP2 imaski yokucoca ubuncinci ama-94% eerosols (ukuvuza okungaphakathi okuphakathi <8%);
- I-FFP3 imaski yokucoca ubuncinci ama-99% eerosols (ngaphakathi ukuvuza ngaphakathi 2%).
1.Ngaphambi kokuba unxibe imask, coca izandla zakho kakuhle ngesepha nangamanzi.
2.Cover umlomo kunye neempumlo ngemaski yakho kwaye uqiniseke ukuba akukho zithuba phakathi kobuso bakho kunye nemaski.
3.Umda ochukumisa imaski ngelixa uyisebenzisa kwaye, ukuba uyakwenza, hlamba izandla zakho.
4.Khangela imaski xa imanzi.
5.Ukususa imaski yakho, yithathe usebenzisa i-tag elastiki, ngaphandle kokuchukumisa ngaphambili kwaye ulahle kwangoko kwimgqomo evaliweyo.
Ukuthintela ukufunyanwa kosulelo:
Ukucocwa kwezandla yenye yeendlela eziphambili zokuthintela ukufumanisa nokusasazeka kwezifo zokuphefumla. Hlamba izandla zakho rhoqo. Zama ukungachukumisi impumlo yakho, amehlo, okanye umlomo ngaphambi kokuhlamba izandla. Kulumkele ukunxulumana ngokusondeleyo nabanye abagulayo. Coca umphezulu wendlu kunye nezinto osula okanye isitshizi sokucoca xa sikhona. Ukuba uyagula, hlala ekhaya ukunqanda ukuba abanye abantu bagule.
Abavelisi bemaski abaninzi kutheni uKhetha thina?
Ixabiso le-1.Low ngomgangatho ophezulu.
I-2.Mask enemibala eluhlaza namhlophe.
3.Umveliso: i-500,000 yeepcs ngosuku.
Iindidi ezineMask yabantwana / yabantu abadala.
Umvelisi oqhelekileyo, ovavanywa ngamaziko ovavanyo asemthethweni aseTshayina kwaye ahlangabezana nemigangatho yokuthumela yase China ≥95% (sinxibelelane nengxelo yovavanyo).
6.Iqela lokuthengisa elinenzala, ngaphezu kweminyaka engama-8 yamava orhwebo lwangaphandle. Iiyure ezingama-24 ezikwi-intanethi ukukunceda ukusombulula yonke imibuzo.
Edlulileyo: Ukuhlinzwa Mask
Okulandelayo: Umatshini ozenzekelayo o-1 + 1
Ii-Mask zeZonyango ezi-Diskiweyo
Umatshini weMaski oYilahlekayo
Izixhobo zeMaski yoNyango lwezoNyango
Unyango lweMaski yoNyango lwezoNyango
Umatshini weMaski yoNyango
Umatshini Wokwenza IMaski yoNyango
Umatshini wemaski ongalukanga
Imaski yoNyango yoNyango